Mahadum Library Electronic Directory Kiosk dị ka Sig ...
32 inch Interactive Self Check na Kiosk Hotel na K ...
19inch Touch Screen Desktop Onwe-Ndebanye aha Visito ...
Ala Dị Mkpa Bitcoin Machine Otu Twozọ Abụọ Dị Mfe ...
Factory Price Piel Digital signage - Product ...
Ahaziri mepụta Touch Screen Digital miri - Pro ...
Ezigbo mma Hand Sanitizer Digital Signage - ...
Professional Design Touch Digital Signage - Ngwaahịa ...
Ft Dịwara Interactive 65inch Screen Digital Akara Digital Kiosk Digital signage Totem
Digital Signage Kiosk Ngwa:
Kiosks mmekọrịta dijitalụ na-arụkọ ọrụ ọnụ bụ teknụzụ dị mkpa maka igosipụta ozi dị mkpa na itinye ndị ahịa na Retail na n'ọtụtụ ụlọ ọrụ ndị ọzọ dị mkpa. Ihe omuma nke nwere ọgụgụ isi na-enye ohere ka ndị na-ere ahịa na ndị ahịa na-emekọrịta ihe, na-enye ọdịnaya na ozi mgbasa ozi dị mkpa na ezubere iche. Langxin na-enye kiosks mmekọrịta dijitalụ na-arụkọ ọrụ ọnụ na atụmatụ ọgụgụ isi nwere ọgụgụ isi iji nyere ndị na-ebugharị ebuli mbughachi na ntinye akara ha ma wulite ahụmịhe ịzụ ahịa omnichannel taa.
Ndị ahịa nke oge a bụ ndị gụrụ akwụkwọ na teknụzụ ma nwee ahụ iru ala na-achọ ozi site na iji kiosks mmekọrịta. Kiosks na-emekọrịta mmekọrịta na-emepụta ahụmịhe nke ịzụ ahịa dijitalụ, na-eduzi gburugburu mmadụ gburugburu dị mgbagwoju anya, na-agwa ndị ọrụ okwu na ọtụtụ ihe ndị ọzọ.
Uzo anyi nke ihe omuma di iche iche di iche iche di iche iche di iche iche di iche iche di iche iche di iche iche di iche iche di iche iche di iche iche.
Kiosk Management System Onwe Onye Ọrụ Kiosk Na Thermal Printer
Usoro Nhazi usoro tiketi Dispenser Kiosk Atụmatụ:
1.5mm ~ 2.0mm nnukwu nchekwa kiosk kabinet na 5 n'ígwé metal mmiri varnish
Agba nke agba kiosk nwere ike ahaziri
Ngosipụta bụ ọkwa LG ọkwa
Tiketi ebi nwere ike ibipụta tiketi sinima, zoo tiketi na na
Barcode nyocha nkwado 1D, 2D, QR code wdg.
Integrated Iye ihuenyo mmetụ bụ mgbochi vandal, mgbochi ájá, obere mmezi
Mfe iji wụnye ma rụọ ọrụ; Moistureproof, Antirust, Anti-acid, Anti-ájá, Static free
Onwe iwu Kiosk Advantanges:
Kiosk na-enye onwe gị iwu na-echekwa oge ichere maka ịtụ nri
Gụghachi ụgwọ ọrụ na ụlọ oriri na ọ restaurantụ restaurantụ
Easy na-adaba adaba maka ọrụ
Kiosks anyị na-ahazi onwe anyị nwere nchebe na nhazi
Obere nkwado maka ihuenyo mmetụ IR
Kiosk kabinet nlereanya nwere ike ahaziri dabere na chọrọ
Ngwa Ngwa Bitcoin:
Langxin na-enye ụzọ kachasị ọsọ, dị mfe ma dị nchebe iji zụrụ Bitcoin jiri ego
ATM Bitcoin na-enye gị ohere iji ego zụta bitcoin. Yiri ka ị si etinye kaadị debit na ATM ọdịnala wee nweta ego, ATM Bitcoin na-anabata ego wee gbanwee bitcoin.
ATM Bitcoin bụ ngwa ọrụ pụrụ iche nke na-arụ ọrụ yiri ATM ọdịnala, mana yana arụ ọrụ agbakwunyere na-eme ka ọ rụọ ọrụ dịka mgbanwe mgbanwe anụ ahụ. akụkụ nke igwe na-enyekwa ohere towithdraw cryptocurrencies na ego. N'ọnọdụ ụfọdụ achọrọ ndị ọrụ ka ha nwee akaụntụ njirimara dị ugbu a iji mepụta azụmahịa
19inch Touch Screen Desktop Onwe-Ndebanye aha Visitor Management Kiosk
Ngwa Ndị ọbịa Kiosk:
Kiosk Nlekọta Ọbịa si Langxin bụ ihe ngwọta kachasị mma iji bulie usoro nlekọta ndị ọbịa gị.
Ọ na-abawanye arụmọrụ gị n’ihu site na ikwe ka ndị nnabata na-arụ ọrụ na ọrụ ndị ọzọ dị mkpa ebe ndị ọbịa gị na-abanye onwe ha na kiosk nlekọta ndị ọbịa. Ọ bụ ụzọ dị mfe iji jiri usoro ịdebanye aha na ntinye aka banye kensinammuo, maka ịga ije ma ọ bụ ndị ọbịa edebanyere aha ha.
Ọ dị mfe iji ndebanye aha ndị ọbịa na-arụ ọrụ onwe gị, banye na njikwa.
32 inch Interactive Self Check na Kiosk Hotel na Key Card Dispenser
Onyocha onwe gi na Kiosk Hotel Atụmatụ:
Ezigbo ọbịa enyi na enyi
Nnyocha Onwe Onye nke Na-anapụta Ọdịnihu Ndị Ọbịa
Mee ka ahụ ndị ọbịa mara
Enweghị nsogbu onwe gị na-eduzi usoro ndenye / usoro
Belata Oge ndị ọbịa na-eche
ebuli mkpara arụpụtaghị
Mee ka nbanye dị nfe ma nbanye
enye Real oge ime ụlọ
Mahadum Library Electronic Directory Kiosk dị ka Signage na Wayfinding
Akwụkwọ ndekọ kọntaktị Electronic:
Onwe Obibi Kiosk chekwaa oge ichere na ibi akwụkwọ
24 awa ọrụ
Kiosk obibi akwụkwọ anyị ji aka anyị echekwa ya
Ọgụgụ isi Easy Touch Self Printing Kiosk na A4 Lase Printer
Ulo guzo ezi FHD 4K Ultra Thin Double-sided Digital Signage with Tempered Glass
Njirimara * Ngosiputa uzo abuo * Teknụzụ QLED dị elu * Super Ultra Slim ọ bụ ezie na ọ bụ ngosipụta ihu abụọ * Size: 43 ”& 49 ″ & 55” * A na-enweta ya na 4 Designs * E wuru na Android / Windows * Dị na WiFi yana 3G & 4G * Abụọ abụọ otu oyiyi & oyiyi dị iche iche dakọtara * Disruptively ọnụ ahịa na-enye affordability na doro * Centrally jikwaa niile na ihuenyo site Afọ Management System * Bụrụ onye mbụ iji gosipụta ọgbọ na-esote dijitalụ sig ...